Al-Shabaab oo haween ku kufsaday degmada Mesegawaay iyo dadka degaanka oo si weyn ula yaabay xukunka raggii ka dambeeyay kufsigaasi
Laba ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ee iyagu ka arrimiya degmada Mesegawaay ee gobolka Galgaduud ayaahabeen hore waxay kufsadeen haween ka mid ah dadka degaanka, kaddib ay gurigeeda ugu dhaceen laba ka tirsan maleeshiyada xarakada Al-Shabaab.
Wararka ayaa sheegaya in haweeneyda markii loogu soo galay gurigeeda ay qeylo cirka ku toshay, iyadoo dadka magaalada ay ku soo baxeen haweeneyda qeylineysay hase yeeshee ma jirto wax tallaabo ah oo ay dadkaasi qaadeen kaddib markii ay ogaadeen in falkani uu yahay mid ay ka dambeeyeen ragga maamulka degmada gacanta ku haya.
Mid ka mid ah dadka degaanka oo sababo nabadgelyo aawgood diiday in magaciisa aanu soo xigano ayaa u sheegay shabakadda Wacaal Media in haweeneyda ay ahayd xaas, isla markaana ninkeeda oo magaalada gees kale uga sugnaa aanay jirin wax tallaabo ah oo uu u qaaday kufsiga loo geystay xaaskiisa.
Dhinaca kale maamulka ururka Al-Shabaab ee degmada Masagawaay ayaa soo qabtay labadii maleeshiyo ee iyagu ka dambeeyay falka kufsiga ah, iyadoo mid ka mid ah labadii nin la sii daayay, halka nin kale oo horay guur u soo maray isna xabsiga la dhigay, inkasta oo warar aanu ka helnay maamulka ururka Al-Shabaab ee degmadaasina ay sheegayaan in ninka la xiray meel kale loo bedelayo.
Arrintaan fool xumada ah ee maleeshiyaadka Al-Shabaab kula kaceen dadka degan degmada Mesegawaay ayaa waxaa layaab ku noqotay xukunka ay fuliyeen maamulka Al-Shabaabka degmadaasi, iyagoo isweydiiyay shareecada Islaamka ee ay Shabaabku sheegayaan inay mid sidii la doono laga yeelayo oo noqotay la jiifiyaana bannaan, la joojiyaana bannaan.